Sanadka dambe iyo baraaktiiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Massor av praktik
Sanadka dambe iyo baraaktiiga
La daabacay torsdag 10 september 2009 kl 15.34
Sanadka dambe iyo baraaktiiga Foto:Fredrik Persson SCANPIX
Sanadka soo socda ayaa lugu wadaa in loo baahdo boosas baraaktiik tirro badan oo loo diro dadka shaqo la’aanta heysa, kadib markii ay dhinaca dowlada ka yimaadeen isbadalo ama ay dooneyso iney sameyso. Hey’ado badana waxey isweydiinayaan haddii isbadalkaasi dhab ahaan noqonaya mid shaqeeya. Bisha oktoobar ee soo soctonaa waxaa lugu wadaa in la helo 20.00 baraaktiik ah sidaasina waxaa xaqiijiyey xafiiska shaqada ee Arbetsförmedligen-ka. Balse isbadaladii ay dowlada ay sameysay toddobaadyadii tagay ayaa sameynaya in loo baahan yahay qiyaastii 55.000 oo boosaska baraaktiiga ah sanadka socda.
Hey’ada la kala yiraahdo LO iyo SKL ayaa iyagana tilmaamaya iney tani ka dhigi karto dhibaato ah in la waayo boosaskaasi baraaktiiga loogu talagalay. Sodoo kale 40.000 oo baraaktiik ah ayaa iyagana horey u qaadaya barnaamij loogu magac daray hinjin ama kor u qaadis. Hey’ada maamulka gobolada iyo degmooyinka ee SKL waxey xisaabineysa in 15.000 oo baraaktiikplats ah loo baahan yahay si loogu damaanad qaado bukaanka jirada ku qoran sanadka soo socda. Marka laga reebo talaabada labada siyaasadood ah ee suuqa shaqada u baahan yahay in la hirgeliyo 55 kun oo boosas baraaktiik ah.
Waxaa sidoo kale jira talaabooyin kale oo suuqa shaqada ku saabsan kuwaasoo baraaktiiga ay ku jiraan marka ay kor u kacdo shaqo la’aanta.
Per Arne Andersson oo ka tirsan SKL ayaa runsan in lugu guuleysan karro in la helo baraaktiigyo kale, maxaa yeelay muddada waa sadex ilaa lix bilood, taasoo macnaheedu tahay in 150.000 oo qof ay heli karaan boosaska baraaktiiga muddo cayiman gudahood marka ay timaado talaabada arrimahaas la xirriira la soo ban dhigi doono toddobaadyada soo socda. Per waxa uu sheegay in haddii xaaladu tahay qalalaasihii dhaqaale ee sagaashameeyadii ka jiray dalkan in cambaadheyntii waqtigaasi jiray aysan sameyn macno badan, islamarkaasina baraaktiyadii dadka loo diray aaney wax weyn abuurin, maantana arrimahaas horey dhacay casharo lugu qaaadan doono. Ninka la yiraahdo Pelle Johansson oo isagana ka tirsan LO ayaa ugu dambeyntii waxaa uu ka digay in dadkoo dhami loo wada heli waayo baraaktiik.